Sifooyinka sida Xayawaanka | Bogagga rinjiga bilaash ah ee loogu talagalay
Kabaha xayawaanka ah - Macaashka
Yaa go'aansada in uu noqdo caaro sida xayawaan, waa in la ogaadaa in aysan ahayn qalab lagu ciyaaro. Caaradu waxay marmarka qaarkood gacanta ku dhigi kartaa, laakiin badanaa xayawaanka ayaa doorbidaya joogitaan la'aanta joogtada ah ee xagjirnimada.
Kufeeyayaasha sida xayawaanka
Haddii gacanta ay gaadho xuddunta, tani waxay keeneysaa walaac ku saabsan caarada, xayawaankuna wuu qani karaa. Xagasha boodboodka ee caarada waa la hayaa waa inay lahaataa xariiqa 30 40 centimeters. Dhererka waa inuu cabbiraa ilaa santimitirka 50. Inta lagu jiro moulting, xayawaanka waa in aan la quudin.
Haddii kale, cuntada caaradu waxay ka kooban tahay cayayaanka iyo qoryaha nool, sida ciriiriga oo laga iibsan karo dukaamada khaaska ah. Intaa waxaa dheer, mar walba biyo waa in la helaa. Dabeecadda caarada waa mid sahlan. Xayawaanku uma baahna kuleyl aad u qoto dheer iyo mulchin jilif sida dhulka hoostiisa.
Cajiidee noocee ah ayaa ku habboon in lagu hayo?
Noocyada caanka ah ee ugu caansan sida xayawaan, waa tarantula gaduudka cas, iyo sidoo kale caarada shimbiraha cas ee cagaaran iyo tarantula casaanka ah ee Mexico. Kuwa hore waxay yihiin shan ilaa lix inji oo dhererkoodu yahay mid adag. Tarantula chill wuxuu u koraa si qunyar ah wuxuuna joogteynayaa waqti dheer cuntada. Cuntooyinka la doorbidey ee caanaha guriga waa cayayaanka iyo jiirka.
Jajabka cagaha cagaha ee nabadda jecel waa shimbir shimbir ah oo da'diisu tahay iyo da'da ilaa sannadka 15. Cuntada la doorbiday ee noocyada xayawaanku waa xayawaan ama baranbaro. Sidoo kale, tarantula ee caanka ah ee Mexican waa mid aad u caan ah sida xayawaanka oo si gaar ah ugu habboon dadka bilowga ah sida caarada ugu horeysa. Waxaa lagu quudiyaa jilicsan ama ciriiri.
Waa maxay qiimaha tayada?
Iyadoo ku xiran nooca iyo xajmiga iyo noocyada, tarantula waxay ku kacaysaa Euro 200. Terrarium wuxuu u baahan yahay kharashka xajmiga u dhexeeya toban iyo konton euro, taas oo ku xidhan inta uu le'eg yahay. inay hoos ugu soo baxaan, 15 lakabka jilicsan, xayawaanka cuntada ku nool.
Kormeerku waa nadiif iyo aamusnaan
Ha u baahnin meel bannaan oo aad ku noolaato
Daawashada caarada waa wax xiiso leh
Dabeecad aan qaali ahayn
Faa'iido yar yar
Dad badani waxay isku naqshaan caarooyinka iyo inay leeyihiin arachnophobia dhab ah. Qof kasta oo leh xayawaan sida xayawaan, waa inuu filaa booqashada, oo guriga ka yimaada xakameyaal qashin ah, "ordaya" halkaas. Kaliya kelmadda caaradu waxay dhalisaa raaxo daran iyo argagax dad badan.
Si aamusnaan ah u gurguurtaan "kiciyayaal" taajir ah oo ku dul wareegaya dhulka, dad badan ayaa dhigay jajabyada. Sababtaas awgeed waa inaanad mar walba u sheegin booqdaha markiiba in aad leedahay caaro sida xayawaan.